बिर्सिएर पनि आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला! | Rochak
बिर्सिएर पनि आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला!
September 26, 2021 NepstokLeaveaComment on बिर्सिएर पनि आफु सुत्ने ओछ्यान् वरिपरि नराख्नुस यी ७ प्रकारका चीज, नत्र पछुताउनु होला!
काठमाडौँ । हरेक मानिसहरु राती सुतेपश्चात आनन्दको निन्द्रा चाहन्छन्। राम्रो निन्द्राले शारीरिक थकानको साथै मनको शान्ति समेत मिल्छ। राति सुत्दा यदि राम्रो संग निन्द्रा लागेको छैन भने त्यहाँ वास्तुसंग सम्बन्धित कुनै दोष भएको हुन सक्छ। त्यसैले राति सुत्दा यी ७ सामाग्रीहरु भुलेर पनि आफु सुत्ने खाट तथा सिरानी वरिपरि राख्ने गर्नु हुदैन ।
१.राती सुत्ने समयमा सिरानीमुनि पर्स तथा औषधीहरु कहिले पनि राखेर सुत्नु हुदैन। २.सुतेको समयमा पानीको भाँडोलाई टाउको नजिक राख्नु हुदैन किनकि यसले मनोरोग उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा हुन्छ। ३.सुत्ने समयमा हरेक दिन यो कुराको याद गर्नु पर्ने हुन्छ कि आफु सुत्ने खाटमुनी या सिरानीको नजिक जुत्ता चप्पल राख्नु हुदैन। किनकी यसो गर्नाले शरीरमा नेगेटिभ इनर्जी पैदा गराउछ।
४.यदि राती सुत्दा घर , गाडी या अफिसको चाबी साथमा राखेर सुतियो भने चोरी हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।५.मोबाईल , ल्यापटप आदि जस्ता विद्युतीय सामाग्रीहरु खाटमा राखेर सुत्ने गर्नाले राहुदोष उत्पन्न हुन्छ किनकि हरेक विद्युतीय सामाग्रीहरु राहुसंग सम्बन्धित हुन्छ।
६.आफु सुत्ने बिस्तारा नजिक तेल समेत राखेर सुत्ने गर्नु हुदैन। यसले जीवनमा अनेक प्रकारका कठिनाईहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।७ आफु सुत्ने खाटको ठिक अगाडी सिसा राख्नु हुदैन। यसले नकारात्मक दोष उत्पन्न गर्छ र जसका कारणले हरेक दिन श्रीमान-श्रीमती बीच झगडा हुने समेत सम्भावना रहन्छ।
खाना खान नदिएपछि भोकाएका फोटोग्राफरले बिहेको सबै फोटो डिलेट गरे!
October 3, 2021 Nepstok
एउटा बाउको १२ बहिनि र् छोरि एका एक भए भाइरल हेर्नुश – भिडियो हेर्नुहोस्
पतिलाई अन्तिम विदाई गर्दा आफुलाई सम्हाल्न सनिन् मन्दिरा बेदीले,‘तिमी बिना कसरी बाँचु’?…… देखियो यस्तो